Home » Lahatsoratra farany farany » Karaiba » Fizahantany Karaiba 2021: Gut Punched
Antigua & Barbuda Breaking News • Vaovao Momba ny Aruba • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana Barbados • Vaovao Mafana Belize • Vaovao Mafana Dominica • Vaovao Mafana Repoblika Dominikana • Vaovao Mafana Grenada • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Jamaika • Madagascar Malgache Kitts and Nevis News • Famakiana Vaovao Saint Lucia • Fandikana ny Saint Vincent sy ny Grenadines News • Madagascar Malgache Vaovao • Fandikana News USVI • Nosy Virgin British (BVI) mamaky nes • Karaiba • Vaovao ao amin'ny Nosy Cayman • Cruising • Vaovao farany Brezila • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ireo firenena miankina amin'ny fizahantany indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny Aruba, Antigua, Barbuda, Bahamas, St. Lucia, Dominica, Grenada, Barbados, St. Vincent, ary ny Grenadines, St. Kitts ary Nevis, Jamaica, Belize, the Cayman Islands , ary ny Repoblika Dominikanina (iadb.org). Ho an'ireo nosy ireo, ny fizahan-tany amin'ny firenena no andramena iankinan'izy ireo ara-toekarena ary levona izy io nandritra ny alina.
Rehefa nitaiza ny lohany ratsy tarehy tamin'ny sambo fitsangantsanganana i COVID, natory teo amin'ny kodiarana ny fitantanana.
Ny olan'ny fizahantany, izay azo namboarina sy noresahina tamin'ny dingana voalohany dia navela hitombo sy hanafika ny planeta iray manontolo.
Hatramin'izao, ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo sy ny fizahan-tany, ny birao governemanta, ary ny olom-boafidy dia matetika no mandà ny handray andraikitra amin'ny tsy fitandremana.
Betsaka amin'ireo tompon'andraikitra amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana na fizahan-tany no tsy nanolotra fialantsiny mihitsy noho ny tsy firaharahiany ny zava-misy sy ny siansa ary ny fomba "lohany amin'ny fasika" amin'ny fitantanana ny fikambanan'izy ireo sy ny fiadanan'ireo mpandeha sy ekipa.
Miankina amin'ny fizahan-tany
The ny fianjeran'ny fianjerana dia vokatry ny tsy fahombiazan'ny Karaiba tanteraka hanasongadinana ny asany ara-toekarena sy ny fomba fijery myopika ny loharanon-karena manokana. Ity dia iray amin'ireo faritra tsy dia lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny fizahan-tany mahatratra 14 isan-jaton'ny harin-karena faobe amin'ny taona 2019, ny ankamaroan'ny faritra rehetra. Ireo firenena LAC dia isan'ireo krizy be mpitia indrindra eto an-tany ary ny loza voajanahary dia toy ny hetsika isan'andro fa tsy hatairana na tsy ampoizina. Ny vaovao anefa dia ny hafainganam-pandeha avo sy mampivarahontsana ary fikirizan-tsaina nahitan'ny coronavirus ny fototry ny toekarenan'ireto toerana ireto.
Ny fivoahana noho ny torimaso natokana ho azy, ireo tompon'andraikitra mandray vahiny, fitsangatsanganana ary fizahantany izay tafavoaka velona tamin'ny aretina mahatsiravina indrindra dia izao dia manana andraikitra goavana amin'ny fanasarahana ny indostria lavitra ny fanampiana ny fiainana ary mitaiza azy ireo ho salama indray.
Toy ny olona rehetra izay narary - ilaina ny mandray dingana (dingana matetika amin'ny zazakely), mba hialana amin'ny aretina mankany amin'ny fahasalamana. Raha tsara vintana ireo marary, ny namana, ny fianakaviana ary ny torohevitra tsara avy amin'ny Google pundits amin'ny Internet dia hanome làlana mankany amin'ny fanarenana. Ireo marary dia mety ho tafintohina ary mihemotra im-betsaka, saingy amin'ny fahamendrehana sy finiavana dia ho sitrana izy ireo ary ho vonona hiady.
Araka ny filazan'ny Banky Iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana (IDB) ny valanaretina COVID-19 nitarika ny fihenan'ny toe-karena ratsy indrindra tany Amerika Latina sy Karaiba tao anatin'ny roanjato taona. Ankoatra ny fahasahiranana ara-toekarena dia ny fiantraikany manimba ny areti-mandringana amin'ny fiarahamonina sy ny rafi-pahasalamana any amin'ny faritra. Na dia ny 8 isan-jaton'ny mponina eran-tany aza dia maneho ny 28 isanjaton'ny maty rehetra (atlanticcouncil.org).
Na dia talohan'ny areti-mandringana aza dia ny zava-bitan'ny faritra amin'ny ankapobeny no ratsy indrindra teto an-tany raha tsy 0.1 isan-jato ny fitomboan'ny harinkarena faobe (PIB) nandritra ny taona 2019. Teo anelanelan'ny 2013 sy 2019, ny fitomboan'ny harinkarena faobe any Amerika Latina sy Karaiba dia 0.8 isan-jato ary ny faritra mbola tsy afaka nampandroso toekarena maharitra.
Mizara roa ny firenena amin'ny fidirana amin'ny entana ho an'ny daholobe sy tsy miankina, miainga amin'ny fanararaotana ara-toekarena sy fanabeazana ka hatrany amin'ny sehatry ny fahasalamana ary tontolo madio / azo antoka izay miharatsy noho ny tsy fitandremana asa, fidiram-bola ambany tsy miankina (16 isan-jato GDP), raha oharina amin'ny hafa faritra, ary misy fiatraikany amin'ny famokarana, fanavaozana ary famoronana asa ofisialy (cepal.org, 2020).
Hatramin'ny nanakatonana ny seranam-piaramanidina sy ny fameperana ny fivezivezena ho an'ny mpanjifa dia nidina 67 isan-jato ny fahatongavan'ireo mpizahatany Karaiba tamin'ny taona 2020 raha ny angom-baovao nataon'ny ONU, ny IMF dia nanapa-kevitra fa ny fijanonan'ny trano fandraisam-bahiny isan-taona dia nilatsaka 70 isan-jato ary nijanona tanteraka ny fitsangantsanganana an-tsambo.
Na eo aza ny programa fanaovana vaksiny ary mihena tsikelikely ny famerana ny fivezivezena, ny fanarenana any Karaiba dia miadana tokoa amin'ny fanerena ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (IMF) hampihena ny tahan'ny fitomboana 2021 vinavina 4.0 ka hatramin'ny 2.4 isan-jaton'ny faritra. Nisy farafahakeliny 38,789,000 voalaza voan'ny aretina ary 1,310,000 no voalaza fa maty vokatry ny virus coronavirus tany Amerika Latina sy Karaiba (graphics.reuters.com). Isaky ny aretina 100 voalaza farany nanerana an'izao tontolo izao dia 26 teo ho eo no notaterina avy amin'ny firenena any Amerika Latina sy Karaiba. Ny faritra amin'izao fotoana izao dia mitatitra aretina vaovao tapitrisa tapitrisa isaky ny 8 andro ary nitatitra maherin'ny 38,789,999 hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana.
Ny fihenan'ny mpizahatany dia nanery ny indostria hampihena ny asa - izay, ao amin'ny faritra iray misy asa 2.8 tapitrisa ny fizahantany (manodidina ny 15 isan-jaton'ny asa manontolo). Loza ara-toekarena goavana io. Raha fintinina dia very asa maherin'ny 2 tapitrisa i Karaiba noho ny areti-mandringana (International Labor Organization), maro amin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Rehefa miatrika onja vaovao amin'ny virus coronavirus ny firenena LAC ao anatin'ny fampielezana vaksinina miadana, dia ho sarotra ny fanarenana. Nikatona ny fananana lehibe: Ao amin'ny Repoblika Dominikanina, ny efitrano fialantsasatra Excunta Punta Cana 400 efitra; any Jamaika, ny Half Moon Hotel Jamaica (400); ao amin'ny St. Kitts, ilay Ocean Terrace Inn misy efitrano 50.
Etsy andaniny, ny Sandals Resorts miaraka amin'ny Beaches Resorts dia nanohy ny dokam-barotra, namolavola ny rafitry ny vaksininy sy ny fiarovana ny fizahantany ary ny fenitra ara-pahasalamana. Ny valiny dia ny taha-ponenana tsara indrindra nandritra ny fotoan-tsarotra, niorina tamin'ny fitokisan'ny mpanjifa tamin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra mahery vaika.
Ny Sandaly sy ny morontsiraka dia nampanantena fialan-tsasatra tsy misy ahiahy ary afaka nanatanteraka izany fampanantenany izany hatreto.
Mety tsy hiverina ny fizahantany raha tsy voafehin'ny faritra ilay virus. Amin'izao fotoana izao, hitan'ny Organisation Pan American Health Organisation fa ny hemisphere dia "ao anatin'ny valanaretina mihombo", ary ny virus dia mitohy miompana amin'ny nosy any Karaiba izay isan'ny tranga isanandro, ary ny governemanta Karaiba trosa dia manana vola kely hitazomana ny harinkarenan'izy ireo. .
Ny minisitry ny fizahan-tany any Jamaika, Edmund Barlett dia nijery tamin'ny ankapobeny ny olana ary naka ny olana tamin'izany izy. Io dia namela an'i Jamaika handray anjara amin'ny vahaolana ary nahatonga ny feo Karaiba ho re mafy sy mazava. I Jamaika dia nanjary fonenan'ny Global Tour Resilience and Crisis Management Center misy sampana any Malta, Nepal, Kenya, ary tsy ela koa i Saudi Arabia. Nilaza i Bartlett eTurboNews, fa faly izy amin'ny fitsanganan'ny mpitsidika ankehitriny.
Ny fahaverezan'ny asa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia misy fiantraikany amin'ny tanora, vehivavy ary mpiasa tsy dia nahita fianarana loatra ka mampitombo ny fahantrana sy ny tsy fitoviana. Ny tsy fahampian'ny fahasamihafana sy ny faharetana dia manambara ihany koa ny fanidiana ny banky sy ny fatiantoka amin'ny hotely, trano fandraisam-bahiny, ary sehatra hafa mifandraika amin'ny serivisy fizahantany (izany hoe trano fisakafoanana, fivarotana antsinjarany, mpandraharaha fizahan-tany, mpamily fiarakaretsaka). Miaraka amin'ny fihenan'ny fiaramanidina sy ny fifandonana mitohy amin'ny go / tsy misy fanapahan-kevitra amin'ny sehatry ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria miankina amin'ny mpandeha fitsangantsanganana dia tsy misy vahaolana raha nofoanana na averina any amin'ny toeran-kafa ireo sambo.
Ny faritra Karaiba dia misy trosa betsaka. Na dia nanokatra ny kitapom-bolany aza ny vondrom-bola iraisam-pirenena mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny besinimaro amin'ny fandaniam-bolam-panjakana, dia sabatra roa lela ny fanampiana; nesorina ireo faneriterena akaiky nefa firenena maro izao no miatrika fanamby satria miha mafy ny tsy fahampiana ara-bola sy ny findramam-bola ary mitohy ny krizy.